सरकारले कर कटौती गरेसँगै मोटरसाइकलको मुल्य ह्वात्तै घट्यो…. — newsparda.com
सरकारले कर कटौती गरेसँगै मोटरसाइकलको मुल्य ह्वात्तै घट्यो….
काठमाडौं । सरकारले शनिबार बजेटमार्फत दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने करको सडक दस्तुरमा अधिकतम १ लाख सम्मको छुट घोषणा गरेको थियो । मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको २ लाख सडक निर्माण दस्तुरलाई घटाएर १ लाखमा झारेको छ भने, इलेक्ट्रिक दुई पाङ्ग्रे सवारीमा अधिकतम २ हजारले सडक दस्तुर घटाएको हो ।
हाल सरकारले भन्सार विन्दुमा नै लिने सडक निर्माण दस्तुरमा १ लाख रुपैयाँ कम भएसँगै हेब्भी बाइकको रुपमा बिक्री हुँदै आएको मोटरसाइकलको मूल्य ह्वातै घट्ने भएको छ । यद्यपि यो ४ सय सिसी इन्जिन क्षमता माथिका मोटरसाइकल र विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीमा मात्र गरिएको हो । योसँगै हाल बजारमा रहेका होन्डा, यामाहा, बेनेली, सिएफमोटो, रोयल इन्फिल्ड, बीएमडब्ल्यू, डुकाटी जस्ता ब्राण्डले विग बाइक विक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।